Nahazo ny laharana voalohany i RALAIARIMANANA Elias, kandidà mirotsaka amin’ny anarany manokana. Eo amin’ny laharana faharoa ny Antoko TIM; manaraka azy eo i Faniry Alban RAKOTOARISOA avy amin’ny Antoko APM. Ho laharana fahefatra amin’ny bileta tokana indray kosa i Naina ANDRIANTSITOHAINA avy amin’ny vovonana IRK amin’ny fifidianana ho atao ny faha 27 Novambra ho avy izao. Laharana fahadimy farany kosa no azon’ny Feno Harison, kandidà tsy miankina.
Nosarihina nitokana tamin’ity indray mitoraka ity ny laharan’ny mpanolotsaina kaominaly. Ka eo amin’ny laharana faha roa amin’ny bileta tokana ny IRK, nosoloin-dramatoa RAHARINIRIANA Clémence tena nandritra ny antsapaka. Ny lisitra tarihin-dRANDRIANATOANDRO Tina Laurence kosa no nahazo ny laharana voalohany, ny lisitra mpanolotsaina KOMBA no fahatelo. Laharana fahefatra ny TIM, ary fahadimy ny lisitra tarihin’i Lalatiana RAVOLOLOMANANA.
Laharana bileta tokana : Fifidianana lisitra mpanolon-tsaina (27 Novambra 2019)
Ny kandidàn’ny Antoko TIM NO hany kandidà tsy tonga nanatrika ny fisarihana androany tetsy amin’ny OVEC Nanisana.
Sahy SYLVAIN sy ANDONIAINA Martina
LEGENDE : Hitondra ny laharana fahefatra i Naina Andriantsitohaina ao amin’ny bileta tokana
KANDIDA BEN’NY TANANA
N 1 : Elias RALAIARIMANANA (Tsy miankina)
N 2 : Tahiry Ny Rina RANDRIAMASINORO (TIM)
N 3 : Faniry Alban RAKOTOARISOA (APM)
N 4 : Naina ANDRIANTSITOHAINA (IRK)
N 5 : Feno HARISON (Tsy miankina)
1-RANDRIANATOANDRO Tina Laurence